ny fitsirihana ireo fitaovam-piadiana teo anivon` ny Antenimierandoholona… Inona no hifandraisan` ny tontolo politika ankehitriny amin` ny fanagiazana sy fanaovana lavantin` ireo entan`i Claudine Razaimamonjy sy Mbola Rajaonah, mpandraharaha akaikin` ny fitondrana teo aloha, izay samy any am-ponja? Tsy misy saingy raha ny feo mandeha, tsy manam-bola ny fitondram-panjakana hanatanterahana ny programany. Ireo mpandraharaha Malagasy sy vahiny nianteherana dia fantatra fa lasa nialokaloka any amin` ny firenen-kafa. Mety hiomana amin` ny fifidianana 2023 angamba ka mijery fotsiny izay zava-mitranga aloha. Nahoana ihany koa no niandry ela ny CENI vao nanao ireny fanambarana ireny? Nisy koa ny fitsirihana fitaovam-piadiana natao tamin` ireo andrimpanjakana toy ny Antenimierandoholona. Nahoana anefa no nametram-pialàna ny talen` ny fiarovana teo amin` ity andrimpanjakana ity? Ireo rehetra ireo dia nitranga taminà fotoana nifanakaiky. Fifandrifian-javatra ihany ve? Na eny na tsia , ny zava-misy dia toa milaza ny valiny ihany. Ny tsindry ara-ketra atao amin` ireo mpandraharaha voalaza etsy ambony dia toa manabaribary izay olana ara-bola sedrain` ny fanjakana. Fa vao mainka manasarotra ny raharaha, ireo fanakorontanana maro samihafa. Ny loza dia tsy mianga avy any ivelany ireo fanakorontanana ireo fa avy ao anatin’ny fitondram-panjakana ihany. Ireny fanambarana nataon` ny CENI ireny dia efa manambara fa tsy mari-toerana ny mpitondra eto. Ny fanoherana moa dia tsy niandry ela nitaky ny fanafoanana ireo fifidianana nanomboka ny taona 2018.